अनलाइन शपिङ‍को ठगीबाट यसरी बच्नुहोस् - हिमाल दर्पण
अनलाइन शपिङ‍को ठगीबाट यसरी बच्नुहोस्
घटस्थापनासँगै यस वर्षको महान चाड दशैँको समय सुरु भएको छ । ई–कमर्स कम्पनीहरूमा दशैँतिहारलाई लक्षित गर्दै डिस्काउन्ट र अफरको वर्षात् नै चलेको छ । त्यसमा स्मार्टफोन लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने अफर देखि धेरै सामानको समेत अफर छन् । तर अनलाइनमार्फत कुनै पनि सामान खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, अन्यथा तपाईँमाथि कुनै पनि प्रकारको धोका हुनसक्छ अर्थात् तपाई ठगीमा पर्न सक्नु हुन्।
यसको अर्थ तपाईं अनलाइन ठगीको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले अनलाइन शपिङ गर्दा केही निश्चित विषयहरूमा विचार पुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ ।
१. आधिकारिक वेबसाइट तथा एपबाट मात्र खरिद गर्नुहोस्
कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नका लागि आधिकारिक वेबसाइट वा आधिकारिक मोबाइल एप मात्र भिजिट गर्नुहोस् । यस्ता एप एन्ड्रोइडका लागि गुगल प्लेस्टोर र आईओएसका लागि एप्पल एप स्टोरबाट मात्रै एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।
साथै वेबसाइटमा जाँदा https:// बाट सुरु भएको वा अलिकति तलमाथि वा तोडमोड गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा ख्याल राख्नुहोस् । किन भने वास्तविक जस्तै लाग्ने गरी ठगहरूले नक्कली वेबसाइटहरू समेत बनाउने गरेका हुन्छन् ।
साथै पप-अप लिङ्कको माध्यमबाट प्राप्त डिस्काउन्ट अफरको पछि नलाग्नुहोस् । साथै पप-अप लिङ्कमा क्लिक गर्ने र त्यसमा आफ्नो जानकारी राख्ने गल्ती समेत नगर्नुहोस् ।
किन भने यसो गर्नु सुरक्षाका लागि निकै गम्भीर मानिन्छ । यसबाट तपाईंको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टदेखि बैंक तथा वालेट अकाउन्ट समेत ह्याक हुनसक्छ ।
२. क्याश अन डेलिभरी नै रोज्नुहोस्
अनलाइनबाट हुने ठगीबाट जोगिनका लागि सीओडी अर्थात क्याश अन डेलिभरीको विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् । किन भने यसो गर्दा सामान प्राप्त भएपछि मात्रै तपाईंले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै डेलिभरी भएको सामग्री खोल्दाको समयमा भिडिओ रेकर्डिङ गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् । जसबाट ठगी जस्ता घटनाबाट तपाईंलाई जोगिन र क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न प्रमाणको रुपमा समेत काम आउन सक्छ ।
कहिले काहिँ अर्डर मिसप्लेस अर्थात अर्डर गरेको भन्दा अर्कै सामान डेलिभरी हुने गरेका घटना तपाईं हामीले सुन्दै भोग्दै आएका छौँ । तपाईंसँग भिडिओ रेकर्ड छ भने यस्तो बेलामा सजिलै सामान फिर्ता गर्न र आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सहज हुन्छ ।
३. एटीएम वा क्रेडिट कार्डको जानकारी शपिङ साइटमा सेभ नगर्नुहोस्
प्रायजसो मानिसहरूले जानीनजानी शपिङ साइटमा आफ्नो डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको जानकारी सेभ गरिदिन्छन् । त्यसो त तपाईंको कार्डको विवरण निकै नै सुरक्षित हुन्छ ।
सीभीभी (कार्ड भेरिफिकेसन भ्यालु) तथा पिन नम्बर बिना कसैले पनि तपाईंको कार्ड दुरुपयोग गर्न सक्दैन । तर यदि तपाईं अतिरीक्त तहको सुरक्षा चाहनुहुन्छ भने कार्ड डिटेल नराखेरै शपिङ गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
४. शपिङका लागि बजेट बनाउनुहोस्
चाडबाडको समयमा सधैँ बजेट निश्चित गरेर मात्रै शपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक वा फजुल किसिमको शपिङबाट जोगिन पनि सहयोग पुग्छ ।
जानकारहरूका अनुसार क्रेडिट कार्डको साटो डेबिट कार्ड वा नगद भुक्तानी यस्ता फजुल किसिमका खर्चबाट जोगिन बढी उपयोगी हुने गरेको छ । यस्तोमा शपिङका लागि सूची बनाउनुहोस् र डिल तथा डिस्काउन्ट चेक गर्नुहोस् ।
५. डिस्काउन्ट तथा अफर
ई–कमर्स कम्पनीका अफरलाई अफलाइनमा समेत चेक गर्न नभुल्नुहोस् । किन भने अनलाइनमा भारी मात्रामा छुट देखाएर तपाईंलाई लोभ्याउन खोजिएको पनि हुनसक्छ ।
अहिलेको समयमा धेरैजसो यस्ता प्रयोगकर्ता हुन्छन्, जसले सामग्रीको वास्तविक बजार मूल्य थाहा नपाएर धेरै छुट देखेकै भरमा सामान खरिद गर्ने निर्णय लिन्छन् । यस्तोमा बिक्रेताले सामानको मूल्य अनावश्यक रुपमा धेरै देखाएर भारी छुट दिएको जस्तोगरी तपाईंलाई ठग्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।
त्यसैले बजार पसलमा गएर भए पनि आफूले अनलाइनमा खरिद गर्न चाहेको सामानको मूल्य बुझ्ने गर्नुहोस् । जसले तपाईंलाई देखाइएको छुट वा अफर वास्तविक हो कि होइन भन्ने छुट्याउन समेत सहयोग पुग्छ ।
६. प्रतिस्पर्धी ई-कमर्स कम्पनीको वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्
अनलाइनबाट सामान अर्डर गर्नुअघि आफूले खोजेको सामानको मूल्य अर्को त्यस्तै ई–कमर्स कम्पनीको वेबसाइटमा कति छ भन्ने विषय चेकजाँच गर्न पनि नभुल्नुहोस् । किन भने तपाईंले हेरिरहेको सामान अर्को कम्पनीको वेबसाइटमा निकै सस्तोमा समेत राखिएको हुनसक्छ ।
त्यसमाथि अहिले चाडबाडको बेलामा ई-कमर्स कम्पनीहरूबीच छुट तथा अफरको विषयलाई लिएर चर्को प्रतिस्पर्धा समेत हुनेगर्छ । यस्तोमा राम्रो छुट कुन कम्पनीले दिइरहेको छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
तर छुटको पछि लागेर जुनसुकै ई-कमर्सबाट सामान अर्डर गर्नु पनि राम्रो होइन । किन भने डेलभिरी हुने/नहुने कुराको सुनिश्चितता, डेलिभरी हुन लाग्ने समय, सामान फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आदि विषय समेत अनलाइन शपिङमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
by Himal Darpan ६ दिन अघि
नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीलाई लक्षित गरेर धेरै गीत तयार भएका छन्। हरेक वर्ष दसैं
by Himal Darpan १४ घण्टा अघि